Miidiyaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 6:596:59
Hoji-gaggeessaan Feesbuuk Maark Zuukarbarg yaada waan kana hojjechuu irratti adda-durummaan nama dubbachaa tureera.
...tti maxxanfame 9:42 9 Onkololeessa 20219:42 9 Onkololeessa 2021
Raashiyaan badhaasa Noobeel booda gaazexeessitootaan 'wakiila biyyoota alaa' jechuun labsite
Gaazexeessaan walabaa Raashiyaa Dimtry Muratov badhaasa Nagaa Noobelii argatee sa'aatii muraasa booda, qondaalooti Raashiyaa maxxansawwanii fi gaazexeessitoota baayyee ‘ergamtoota biyyoota alaa,’ jechuun adda isaan baasan.
...tti maxxanfame 4:40 6 Onkololeessa 20214:40 6 Onkololeessa 2021
Butamuu fuula Facebook miidiyaa biyyaalessaa Itoophiyaa EBC duuba qaamni jiru eenyu?
Fuulli facebook dhaabbata Korporeshiniin Birodkaastii Itoophiyaa (EBC)n guyyaa Wiixataa osoo sirna mudama Ministira Mummee Abiy Ahimad kallattiin tamsaasaa jiruu butamuun isaa himamun ni yaadatama. Ofii eenyutuu gochaa kana raawwatee?
...tti maxxanfame 11:01 5 Onkololeessa 202111:01 5 Onkololeessa 2021
Gaazexeessaa Tasfaalam Waldayyas hidhaatii gadhiifame
Hundeessaafi qopheessaan ol-aanaa toora marsariitii Ethiopia Insider kan ta'e gaazexeessaa Tasfaalem Waldayyas hidhaatii gadhiifame.
...tti maxxanfame 9:06 4 Onkololeessa 20219:06 4 Onkololeessa 2021
Gaazixeessaa Tasfaalam Waldayes poolisiin to'atamuun ibsame
Gulaalan olaanaan marsariitii ‘Ethiopia Insider’, gaazixeessaa Tasfaalam Waldayes poolisiin to’atamuu BBC’n Poolisii Federaalaarraa odeeffateera.
...tti maxxanfame 4:11 1 Fuulbaana 20214:11 1 Fuulbaana 2021
'Ani rippoortara malee, hojjettuu manaa miti'
Rippoortarri gurraattiin jalqabaa gaazexaa 'Washigton Post' waahillaan ishee gariin 'na hin beekan ture' jetti.
...tti maxxanfame 11:38 12 Hagayya 202111:38 12 Hagayya 2021
Gaazexeessaan hidhaa bahe waa'ee turtiisaa Awaash sabaattii dubbate
Hojjattoonni Awuloo Miidiyaa fi Itiyoo-Foram Waxabajjii keessa to'annoo jala oolfamuun Awaashi Sabaatiitti turan keessaa 10 jalqaba toran kanaatti gadhiifamuufi kan hafan torba ammas hidhaarratti akka argama abookaatoon isaa BBCtti himan. Turtiin tibba hidhaarra turanii maal akka fakkaatu ilaalchisuun hojjataa Awuloo Midiyaa kan ta'e Kibroom Salamoon akkasiin himeera.
...tti maxxanfame 12:18 11 Hagayya 202112:18 11 Hagayya 2021
Itoophiyaan miidiyaalee addunyaa 'ibsa waajjira MM akka hin malletti gabaasan' jette komatte
Miidiyaaleen addunyaa ibsa waajjirri minitira muummee baase akka hin malletti gabaasuun Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatan jedhe mootummaan Itoophiyaa.
...tti maxxanfame 8:26 10 Hagayya 20218:26 10 Hagayya 2021
Daddabarsitoonni qoricha sammuu hadoochuu gaazexessituu ajjeesuuf doorsisan
Namoonni garee qorichoota sammuu namaa hadoochan daddabarsu bakka buuna jedhan, gaazexeessituu TV gubbaa oduu dhiyeessitu ajjeesuuf dhaadatan.